Ashanti, Keyshia Cole, Ja Rule ka isiokwu 2019 St Maarten Carnival
Location: Mbido » Ịdee » omenala » Ashanti, Keyshia Cole, Ja Rule ka isiokwu 2019 St Maarten Carnival
Akụkọ ọdịnala egwu Ashanti, Keyshia Cole, na Ja Rule ga-edepụta egwu na 50th Anniversary of St. Maarten Carnival. Na Eprel 25, ndị egwu atọ ama ama na mba ụwa ga-ewere ọnọdụ na egwu Soulful Company. Site n'aka St. Maarten Carnival Development Foundation (SCDF), onye na-egwu egwu na-ekwe nkwa abalị nke “ezigbo groovin 'na boppin'”.
2019 na-echeta afọ 50th nke San Maarten Carnival. Ememme ga-eme na eze site na Eprel 20 ruo May 7, na-eme ihe omume Carnival na-amalite na March 16. Na ụbọchị iri atọ na atọ n'ogologo, St Maarten Carnival bụ nke kachasị ogologo na Caribbean.
Onye isi nduzi njem nlegharị anya nke St. Maarten, Oriaku May-Ling Chun kwuru, "Anyị nwere obi a excitedụrị ịnabata Ashanti, Keyshia Cole, na Ja Rule na St. Maarten." “Inwe ndị omenkà atọ a, ndị niile metụtaworo egwu mba ụwa n’ọ̀tụ̀tụ̀ buru ibu otú ahụ, isi okwu nke afọ 50 nke Carnival anyị a ma ama bụ ihe ọ andụ na nsọpụrụ. Anyị enweghị ike ichere ịhụ ike ha na-eweta n'ahịa. ”
Ndị isi atọ ga - esokwa ndị egwu abụọ na - eto eto kacha mma nke St Maarten na ndị otu ha. Ndị ọrụ mpaghara Natisha Hanson na Kenyo Baly ga-eso ndị isi oche na-aga n'ihu, na-anọchi anya The Friendly Island na agba nke abụọ nke egwu Soulful Company.
"Anyị nwere ọtụtụ ndị na-egwu egwu nwere ọgụgụ isi na St. Maarten, na iweta onyinye egwu anyị dị na agwaetiti na ndị omenkà a ga-eweta egwu pụrụ iche pụrụ iche," Mịnịsta nke njem njem, akụ na ụba, njem, na Nkwukọrịta, Stuart Johnson. Ihe ọzọ bụ na, anyị na-atụ anya ohere ndị a mmekota ga-ewetara maka ndị a ahụkebe St. Maarteners, na ike na-eche ịhụ ha ngosi ha onyinye egwu na isi ogbo.
Ntu Company Island Tourism
E jidere onye Turkish a na-enyo enyo na Utrecht na-eyi ọha egwu
Reunion Island NRL viaduct: Ugbu a bụ njem njem njem!